Arsenal oo guuldaro ku bilaabatay horyaalka Premierka iyo Liverpool oo badisay (Sawiro) – STAR FM SOMALIA
Weeraro badan oo ay kooxda Arsenal qaaday ayaan u suurtogelin inay gool ku dhaliso hase yeeshee intii aysan dhamaan qeybtii hore ee ciyaarta ayaa gool loogaga naxsaday kadib qalad uu sameeyay goolhayaha ay 10ka malyan oo Gini ay ku soo iibsatay. Kooxda Hammers ayaa laad xor ah ka soo tuuraneysay meel 35 yard u jirta goolka iyadoo Payet uu kubada soo qaaday, Cech ayaa soo baxay waxaana uu kubada la waayay gacmaha taasoo keentay in Cheikhou Kouyate uu madax ku dhaliyo kubada oo uu dhex dhigo shabaqa faaruq ah.
Qeybtii labaad ayay Arsenal ku bilaabatay si dardar leh iyagoo doonayay inay barbareen ciyaarta, Oliver Giroud ayaana dhowr fursadood helay inkastoo uusan ka faa’ideysanin, fursadiisii ugu fiicneyd waxa ay aheyd daqiiqadii 55aad markii uu baas fiican ka helay Mesut Ozil laakiin darbadiisa waxa ay ku dhacday shabaqa dhinaciisa,
Fagfagtii Arsenal ayaase joogsatay daqiiqadii 57aad markii West Ham ay heshay goolkeedii labaad ee ciyaarta, iyadoo Mauro Zarate uu kubada si sahlan kaga qaatay Oxlade-Chamberlain islamarkaana uu shabaqa durbadiiba toogtay iyadoo Petr Cech uu mar kale qalad goolhaye sameeyay isagoo u dhaqmay sidii inuusan kubada filaneynin oo kale.
Waxaana ay aheyd qaladkii labaad ee goolhaye ee uu sameeyay Cech oo ay Arsenal 10 milyan ginni ku soo iibsatay xagaagan. Arsene Wenger ayaana bedel ku keenay Theo Walcott iyo sidoo kale Alexis Sanchez iyadoo xiddiga reer Chile uu kursiga keydka u fadhiyay kaliya haddii ay xaalad degdeg ah dhacdo madaama uusan taam ahaansho buuxda heysanin, laakiin tababaraha Faransiiska ayaa isticmaalay xiddiga reer Chile madaama kooxdiisa labo gool looga hormaray. Arsenal ayaana cadaadis daran saartay West Ham kuwaasoo iyagana kubada si fiican u difaacanayay iyadoo Alexis Sanchez iyo Walcott ay wax ka bedeleen kubada weerarka ee kooxda Gunners.
Chamberlain iyo Walcott ayaana fursado dahabi ah helay inkastoo aysan gool noqonin. Taageerayaasha Arsenal ee garoonka Emirates ayaana la arkayay qaar badan oo ka mid ah iyagoo garoonka isaga sii baxaya ka hor inta aysan ciyaarta dhamaanin taasoo muujineysay sida niyadjabka leh ee ay kooxdooda ku bilaabatay xilli ciyaareedka horyaalka Premier League. Waxaana ay ciyaarta ku soo ildaatay 2-0 iyadoo West Ham ay badisay kulankii ugu horeysay ee London derby ee xilli ciyaareedkan, waxaana ay guuldarro badeen kooxda Arsenal kulankoodii ugu horeeyay ee xilli ciyaareedka.
Kooxda Liverpool ayaa guul muhiim ah ka soo gaadhay kooxda Stoke City oo ay marti ugu ahayd garoonkeeda Britannia Stadium , waxayna Reds kulan guusha ku gaartay gool layaableh oo uu udhaliyay Coutinho kaas oo kooxdiisa ka caawiyay inay ka soo aarsato kooxda Stoke City.
Inkasta oo ayna Liverpool kulankan soo bandhigin qaab ciyaareedkii laga filayay ayay hadda soo qaadatay saddexda dhibcood ee yaalay garoonka Stoke City. Kooxda Liverpool ayaa xili ciyaareedka cusub ku bilaabatay garoonka garoonkii Britannia Stadium oo ay ay xili ciyaareedkii hore kulankii ugu danbeeyay ku ciyaartay isla markaan ay guuldaro 6 iyo 1 ahi kaga soo gaadhay kooxda Stoke City, waxayna Reds markan rajaynaysay inay dhinaca kale u dhigto natiijadii masiibada ahayd ee dhamaadkii xili ciyaareedkii hore ka soo gaadhay Stoke.Stoke City ayaa
kulankan la soo shirtagtay shaxdan.Sotke Tababare Rodgers ayaa kulankan shaxdiisa ku bilaabay afar ka mid ah saxiixyada uu xagaagan ay Liverpool la soo wareegtay, waxaana kulankoodii koowaad ee rasmi ahaa Reds u saftay ciyaartoyda kala ah Clyne,Gomez, Milner iyo Benteke oo hogaaminayay weerarka Reds.Roberto Firmino iyo Danny Ings oo iyaguna ka mid ahaa saxiixyada ay Liverpool xagaagan suuqa kala soo wareegtay ayuu Rodgers kursiga kaydka ku bilaabay.Xherdan Shaqiri oo muddo lala xidhiidhinayay kooxda Stoke City ayaa Kulankan taaraboonka ka daawanayay waxaana loo qaatay in Shaqiri uu ku soo biirayo kooxda Stoke City.
Qeybtii hore ayaa ku soo dhamaatay goolal la’aan aan wax gool ah la iska dhalin hase yeeshee markii layskugu soo laabtay qaybtii danbe ee ciyaarta ayay ciyaartu noqotay mid ka xamaasad badan sidii ay qaybta hore ee ciyaarta ahayd. Liverpool ayaa markiiba bilawday inay fursado abuurto isla markaana ay dhibato ku abuurto difaaca Stoke balse fursadaha ay Reds abuurtay ayaan wax faa’iido ah soo kordhin.
Daqiiqadii 63 aad ayuu Rodgers ciyaarta soo galiyay Emre Can isaga oo ku soo badalay Adam Lallana, waxayna Liverpool u muuqatay inay dardar fiican ka heshay Emre Can. Daqiiqadii 67 ayuu Coutinho kubbad fiican la soo dhex orday difaaca Stoke wuxuuna ku sigtay inuu fursad halis ah abuuro balse difaaca Stoke ayaa fursadiisa waxba kama jiraan ka dhigay.
Wax yar kadib Henderson ayaa fursad qaali ah kooxdiisa ka lumiyay. Si kasta ha ahaatee waxaa ciyaarta dhinac u rogay Philippe Coutinho oo daqiiqadii 86aad kubbad uu ka helay Gomez uu darbad xoog leh ku laaday goolka Stoke meel u jirta 25 yard waxaana uu awoodi waayay goolhayaha Stoke inuu xitaa kor marsiiyo birta waxana uu goolkaas noqday mid kooxda Liverpool uga dhignaa inay ka aargoosatay kooxda Stoke xilli ciyaareedkii hore. Kulan kale oo maanta dhacay ayaa waxaa isku arkay kooxaha Newcastle United iyo Southampton waxana ay ku kala baxeen barbarro 2-2 ah.